Air Madagascar Plane skids eny fiaingana
2 taona 5 volana lasa izay #275 by Colonelwing
Fiaramanidina fiaramanidina mitandahatra, TSB mandinika ny toetr'andro
Asabotsy Febroary 25, 2017, 6: PM PM -
Ny Birao fiarovana misahana ny fifamoivoizana dia manadihady ny antony mahatonga ny fiaramanidina Air Canada tonga any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Pearson any Toronto izay nirotsaka an-dalambe ny asabotsy maraina.
2 taona 5 volana lasa izay #276 by Dariussssss
Zavatra iray tsy azoko an-tsaina eto ... Ny fiaramanidina ve tany amin'ny ahitra teo akaikin'ny rw, na ...?
Fialana amin'ny làlan-dàlana ... tsy miteny betsaka, fa mety iray kodiarana amin'ny rw, na ny fiaramanidina manontolo. Nefa, mampahatsiahy ahy ny fianjeran'ny TAM A320 tany São Paolo. Nipoaka ihany koa ilay pist.
2 taona 5 volana lasa izay #280 by Colonelwing
Tsy toy ny efa nolazaina momba izany ,,, eto ny tantaran'ny mpandeha an-tongotra
Nianjera mafy izahay, tena sarotra ': ny sidina Air Canada dia miala amin'ny làlan-dàlana ao Toronto
2 taona 5 volana lasa izay #289 by Gh0stRider203
Misy tantara tsara eto ...